साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ : प्रधानमन्त्री – नेपाली संगसार
साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्छ : प्रधानमन्त्री
नेपाली संगसार calendar_today १७ चैत्र २०७७, 3:59 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने बताएका छन्।
रिपोर्टस क्लबको वार्षिकोउत्सव कार्यक्रममा उनले भने, ‘हामी साउन १ गतेदेखि वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछौँ। यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्को छटपटी भयो होला।’
उनले आफूले देश विकासको लहर ल्याएकाले हटाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘देश संकटमा पर्‍याे रे? कहाँ पर्‍याे देश संकटमा? कहाँ पर्यो संघीयतामाथि संकट?’ उनले भने।
नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरु लागिरहेको बताए।